Bone Fracture (အရိုးကျိုးခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Bone Fracture (အရိုးကျိုးခြင်း)
Bone Fracture (အရိုးကျိုးခြင်း) ကဘာလဲ။
Fracture ဆိုတာ အရိုးကျိုးခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ အရိုးကျိုးခြင်း လေးမျိုးရှိပါတယ်။ နေရာရွေ့ခြင်း(Displaced)၊နေရာမရွေ့ခြင်း (Non-displaced)၊ အပွင့် (Open)၊ အပိတ်(closed) ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Displaced နဲ့ Non-displaced fractures တွေဟာ အရိုးကျိုးပုံကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Displaced fracture မှာဆိုရင် အရိုးဟာ နှစ်ပိုင်း (သို့) ထက်ပိုပြီး ကျိုးသွားခြင်းဖြစ်ကာ ကအစွန်းနှစ်ဖက်ဟာ ဖြောင့်တန်းခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ Non-displaced fracture မှာတော့ အရိုးဟာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့) လုံးဝကျိုးသွားခြင်းဖြစ်ပြီး သူ့နဂိုပုံစံအတိုင်းသာ ရှိနေပါတယ်။
Closed fracture မှာတော့ အရိုးဟာ ကျိုးပေမယ့် အရေပြားကို ပေါက်လာခြင်းမရှိပါဘူး။ Open fracture ကတော့ အရိုးဟာ အရေပြားကို ဖေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ သူဟာ အနာထဲပြန်ဝင်သွားတာမို့ အရေပြားပေါ်ကနေ မြင်နိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ closed fracture နဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကွာခြားမှုဖြစ်ပြီး open fracture မှာ နက်တဲ့ အရိုးရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အရိုးကျိုးခြင်း အမျိုးအစား များစွာရှိပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့ အမျိုးအစားတွေကတော့
Avulsion fracture – အရိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ ကြွက်သား (သို့) အရွတ်တွေဟာ ဆွဲပြီး အရိုးကျိုးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Comminuted fracture – အရိုးဟာ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကျိုးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Compression (crush) fracture – ကျောရိုးမမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ဥပမာ ကျောရိုးဆစ်ရဲ့ အရှေ့ပိုင်းနေရာဟာ အရိုးပွခြင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
Fracture dislocation – အဆစ်လွဲခြင်းဖြစ်ပြီး အဆစ်ရဲ့ အရိုးတစ်ခုကျိုးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Greenstick fracture – အရိုးက တစ်ခြမ်းမှာ တစ်ပိုင်းတစ်စကျိုးခြင်းဖြစ်ပြီး အရိုးရဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းဟာ ကွေးနိုင်တာကြောင့် လုံးလုံးကျိုးခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးငယ်တွေမှာအဖြစ်များပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အရိုးဟာ ပိုမိုပျော့ပြောင်းပြီး ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်စွမ်း ရှိုလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Hairline fracture – အရိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျိုးခြင်း ဖြစ်ပြီး သိရှိဖို့ ခက်ပါတယ်။
Impacted fracture – အရိုးကျိုးတဲ့အခါ ကျိုးတဲ့အပိုင်းဟာ နောက်တစ်ပိုင်းပေါ် ထပ်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Longitudinal fracture – အရိုးရဲ့ အရှည်အတိုင်း ကျိုးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Oblique fracture – ထောင့်ဖြတ်ကျိုးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Pathological fracture – အခြားရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် အရိုးအားနည်းပြီး ကျိုးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Spiral fracture – အရိုးရဲ့ ကျိုးတဲ့ အစိတ်အပိုင်တစ်ခုဟာ လိမ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Stress fracture – အားကစားသမားတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အရိုးဟာ ဖိအားတွေ၊ တင်းအားတွေကြောင့် ကျိုးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Torus (buckle) fracture – အရိုးဟာ မကျိုးပဲ ပုံပျက်သွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ နာကျင်မှုရှိပေမယ့် သူက တည်ငြိမ်ပါတယ်။
Transverse fracture – အရိုးထက်ဝက်ကျိုးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Fracture ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
အရိုးကျိုးခြင်း အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ လူတိုင်း အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Fracture ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
Fracture ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ဒဏ်ရာရရှိတဲ့နေရာပတ်လည်မှာ နာခြင်း၊ ရောင်ခြင်း
လှုပ်လိုက်ရင်၊ ဖိလိုက်ရင် နာကျင်မှု ပိုဆိုးခြင်း
ထိခိုက်မိတဲ့နေရာမှာ လှုပ်ရှားမှု ပျောက်ဆုံးခြင်း
Open fractures တွေမှာ အရေပြားဖေါက်လာတဲ့ အရိုးကို မြင်နိုင်ခြင်း
သင် (သို့) လူတစ်ယောက်ယောက် အရိုးကျိုးပြီလို့ သံသယရှိရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတွေက Fracture ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
ဒဏ်ရာရခြင်း – ချော်လဲခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား မတော်တဆဖြစ်ခြင်း၊ ဘောလုံးပွဲမှာ ဒဏ်ရာရခြင်းတွေဟာ အရိုးကျိုးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အရိုးပွခြင်း – အရိုးပွခြင်းဟာ အရိုးတွေကို အားနည်း ကြွတ်ဆတ်စေကာ ပိုကျိုးလွယ်စေပါတယ်။
အလွန်အကျွံသုံးခြင်း – ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်ခြင်းဟာ ကြွက်သားတွေကို ပင်ပန်းစေပြီး အရိုးတွေပေါ် ဖိအားသက်ရောက်စေကာ ဖိအားကြောင့် အရိုးကျိုးခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရိုးကျိုးခြင်းဟာ အားကစားသမားတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက Fracture ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
Fracture ဖြစ်နိုင်ခြေဟာ အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အရိုးကျိုးခြင်းဟာ ကလေးငယ်အရွယ်မှာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အရိုးကျိုးခြင်းဟာ လူကြီးတွေမှာလို ရှုပ်ထွေခြင်း မရှိပါဘူး။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ အရိုးတွေဟာ ကြွတ်ဆတ်လာပြီး ငယ်ရွယ်စဉ်ကဆို မဖြစ်နိုင်တဲ့ ချော်လဲတာနဲ့ အရိုးကျိုးခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Fracture ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
အရိုးကျိုးခြင်းကို အတည်ပြုဖို့ အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းကတော့ X-rays ရိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က အရိုးကျိုးခြင်းကို အတည်ပြုဖို့ X-rays ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ X-rays တွေက အရိုးဟာ ကောင်းလား၊ ကျိုးနေလားဆိုတာ ဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။ အရိုးကျိုးခြင်း အမျိုးအစားနဲ့ အရိုးရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ကျိုးလဲဆိုတာပါ ဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။
တခါတရံမှာ X-rays ဟာ အရိုးကျိုးခြင်းကို မပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ များသောအားဖြင့် လက်ကောက်ဝတ်ကျိုးခြင်း၊ တင်ပါးဆုံ ကျိုးခြင်းနဲ့ ဖိအားကြောင့် ကျိုးတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေမှာ သင့်ဆရာဝန်က အခြားစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ CT scan, MRI, bone scan တွေကို လုပ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
အချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ X-rays ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ကျိုးခြင်းတွေမှာ သင့်ဆရာဝန်က နေရာကို မလှုပ်အောင်ထားပြီး ၁၀-၁၄ ရက်ကြာမှ နောက်တစ်ကြိမ် X-rays ပြန်ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
တခါတရံမှာတော့ အရိုးကျိုးခြင်းကို သိရှိပြီးရင်တောင်မှ အခြားစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ CT scan, MRI, သို့ angiogram,aspecial X-ray of blood vessels တွေကို လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ အရိုးပတ်လည်က တစ်ရှူးတွေ ထိခိုက်မှု ရှိမရှိ သိလိုတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ဆရာဝန်က ဦးခေါင်းခွံကျိုးတယ်လို့ သံသယရှိရင် X-rays ကိုကျော်ပြီး CT ရိုက်ကာအရိုးကျိုးခြင်းနဲ့ ခေါင်းအတွင်းမှ ဒဏ်ရာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ပျက်စီးမှုတွေ (ဦးနှောက်သွေးယိုခြင်း) ကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Fracture ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
ကုသမှုမှာ အခြေခံသဘောတရား တစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျိုးသွားတဲ့ အပိုင်းတွေကို ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ထားပြီး ပြန်မကောင်းမချင်း လှုပ်ရှားမှုမှ ကာကွယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျိုးတဲ့အရိုးတွေဟာ အစွန်းတွေမှာ အရိုးအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရိုးကျိုးခြင်းကို ကုသဖို့ ခွဲစိတ်မှု လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကုသမှုကတော့ အရိုးကျိုးခြင်းရဲ့ ပြင်းထန်မှု၊ open fractureလား၊ closed fracture လားနဲ့ ဘယ်အရိုးလဲဆိုတာပေါ် မူတည်ပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေက အရိုးကျိုးခြင်းကို ကုသဖို့ နည်းမျိုးစုံအသုံးပြုကြပါတယ်။
Cast immobilization:aplaster or fiberglass ဟာ အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျိုးသွားတဲ့ အရိုးအတော်များများဟာ ပြန်ကောင်းနိုင်တာကြောင့် ကျောက်ပတ်တီးစည်းပေးပြီး ကျိုးတဲ့အရိုးတွေကို ပြန်မကောင်းမချင်း နေရာမှန် ပြန်ထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Functional Cast or Brace: the cast သို့ brace ဟာ အနီးက အဆစ်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကုသမှုကိုတော့ အချို့မှာသာ အသုံးပြုပြီး အရိုးကျိုးခြင်း အားလုံးမှာ မသုံးပါဘူး။
ဆွဲခြင်း – ဆွဲခြင်းဟာ ကျိုးနေတဲ့ အရိုးတွေကို ဖြည်းညင်းစွာ နေရာပြန်တည့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
External Fixation: ဒီခွဲစိတ်မှုမှာတော့ ကျိုးတဲ့နေရာရဲ့ အပေါ်နဲ့ အောက်က အရိုးထဲကို metal pins တွေ screw တွေ ထည့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ pins တွေ screws တွေဟာ အရေပြား အပြင်က သတ္တုပြားပေါ်ကို ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိရိယာဟာ အရိုးတွေကို နေပြန်မကောင်းမချင်း မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာ ထားရှိဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အရိုးကျိုးတဲ့နေရာရဲ့ ပတ်လည်က အရေပြားနဲ့ အခြားတစ်ရှူးတွေ ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ external fixator အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Open Reduction and Internal Fixation: ခွဲစိတ်စဉ်မှာ အရိုးအပိုင်းအစတွေကို ပုံမှန်ပုံစံပြန်ရောက်အောင်လုပ်ပြီး ဒီအတိုင်းရှိစဉ်မှာ screws တွေကို အသုံးပြုကာ အရိုး ပြင်ပက သတ္တုပြားနဲ့ ဆက်သွယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းအစတွေကို အရိုးရဲ့ အလယ်မှာရှိတဲ့ ရိုးတွင်းခြင်ဆီနေရာမှာ တုတ်ထည့်ပြီး မလှုပ်အောင် ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Fracture ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Fracture ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အရိုးကျိုးရင် ကျောက်ပတ်တီး ဖယ်လိုက်တဲ့အခါ ဒီနေရာကို တဖြည်းဖြည်း ပြန်လည် အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးတွေဟာ ပုံမှန်ခွန်အားကို ပြန်ရဖို့အတွက် ၄ ပတ်ကနေ ၆ ပတ်အထိ ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်သင့်လဲဆိုတာ ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ ရေကူးကန်ထဲမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ အရိုးတွေကို ပြန်လည်ကျန်းမာသန်စွမ်းစေမယ့်နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်းဟာလည်း အရိုးတွေကို အားရှိစေပါတယ်။ ကယ်စီယမ်နဲ့ ဗီတာမင်ဒီပါဝင်တဲ့ အစားအသောက်ဟာ အရိုးကိုအားပြန်ပြည့်စေပါတယ်။
Fractures. https://medlineplus.gov/fractures.html. Accessed October 3, 2016